Dagon University Youth Parliament (DUYP) | Yangon
Dagon University Youth Parliament (DUYP)
Time Thu Jan 25 2018 at 09:00 am
Dagon University, Yangon, Myanmar (Burma)
Created by DULSA Follow Contact Promote Your Event
ဒဂုံတက္ကသိုလ် လူငယ်များပါလီမန် (DUYP) ဆိုသည်မှာ လူငယ်များပါဝင် သည့် နှစ်ရက်တာကာလ ကြာမြင့်မည့် ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပြီး ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဥပဒေကျောင်းသားကျောင်းသူများအဖွဲ့အစည်း (DULSA)မှ ကြီးမှူး ကျင်းပမည့်ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ DUYP ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူငယ်များ၏ Research skill, Team-work skill နှင့် တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်နိုင်မည့် ခေါင်းဆောင်စွမ်းရည်များတိုးတတ်စေလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်မည့် ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ထိုပွဲသို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေသောကျောင်းသားကျောင်းသူမည်သူမဆိုစိတ်ပါဝင်စားသူများ ပါဝင်နိုင် လျှောက်ထား ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်လူငယ်များပါလီမန် (DUYP)ပွဲလေးကို ဇန်နဝါရီလ ၂၅ နှင့် ၂၆ရက်နေ့များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
ပါဝင်ရန်လျှောက်ထားသူများမှ ၃၂ဦးအားရွေးချယ်ပြီး ထိုအရွေးချယ်ခံရသူများအား အဖွဲ့ငယ် ၈ဖွဲ့ခွဲကာ တစ်ဖွဲ့လျှင် အဖွဲ့ဝင် လေးဦးပါဝင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသ ကိုယ်စားလှယ်များအသီးသီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုတိုင်းဒေသများမှာ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည်တို့ဖြင့် အဖွဲ့ငယ်များတည်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်သည့်လူငယ်လူရွယ်များသည် ထိုပွဲနေ့ရက်များတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ပြောဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
Dagon University Youth Parliament ( DUYP) isayouth-centered two-day event organized by Dagon University Law Students’ Association (DULSA) . DUYP aims to enhance research skill , Team-work skill and most importantly , lead the youths to see our nation with the union spirit . All the students from Dagon University are entitled to apply for this event. Dagon University Youth Parliament (DUYP) will be held from 25th to 26nd January (tentative).
32 participants will be selected among the candidates and those selected participants will be divided into 8 groups with four members in each. Those 8 groups will be representing national races of our country , Kachin, Kayah , Karen, Chin, Bamar, Mon, Rakhine & Shan respectively. They will be discussing upon the title of “Promoting the Connectivity in Myanmar“ with the political , economic and socio-cultural perspectives.
Also check out other Sports Events in Yangon.
Map Dagon University, Yangon, Myanmar (Burma)
Transformational Leadership Journey AweakenTheGreatLeaderWinthin
Peugeot Thadingyut Promotion
Thadingyut Special Promotion Up to 60% Discount
Seminar & Panel Discussion on Human Resources Management
Yangon International Gems and Jewellery Fair 2019